Dowladda Ingriiska oo Midowga Afrika ka Dalbatay in la Baaro Dad shacab ah oo Ciidamada AMISOM ay ku Dileen Marka – Radio Daljir
Agoosto 30, 2015 2:48 b 0
Axad, Ogoosto 30, 2015 (Daljir) — Danjiraha Britain u jooga Golaha Ammaanka ee QM, Ambassador Matthew Rycrift ayaa sheegay inay Ururka Midowga Africa garwaaqsadeen inuu qalad ahaa weerarkii ay Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM ku dileen dhowr qof oo ku sugnaa Xaflad Aroos oo ka dhacday magaallo-madaxda Gobalka Sh/hoose ee Marka.
Ambassador Matthew Rycrift ayaa hadalkaasi ku sheegay Wareysi uu siiyey Wargeyska Inner City Press ee dabagalka ku sameeya Dhacdooyinka Caalamiga, wuxuuna tilmaamay inuu falkaasi ahaa mid aad khatar u ah, isla markaana ay Midowga Afrika ka bixiyeen raalli-gelin iyo inay baarayaan dilkaasi.
“Midowga Afrikaa waxaa haatan looga baahan yahay Xisaabtan, loona baahan yahay inuusan shilkaasi oo kale dhicin, lana xaqiijiyo ammaanka dadka rayidka” ayuu yiri Danjiraha Britain u jooga Golaha Ammaanka ee QM.
Waxa uu tilmamay inay Dowladda Britain horey u qaadayso Wada-tashi lala yeesho Midowga Afrika, iyo in si degdeg ah loo asaaso Unug u xil-saaran Ammaanka.
Dhinaca kale, Ergayga Gaarka ee Xoghayaha Guud ee QM ugu qaabilsan Arrimaha dalka Somalia, Nicholas Kay ayaa u sheegay Wargeyska Wargeyska Inner City Press inay Koox Baarayaal ah dabayaaqadii bishii July u direen magaalladda Marka, isla markaana AMISOM kala shaqeynayaan Baaritaankooda madax bannaan ee ku aadan dilkii loo geystay dadka rayidka ahaa.
Nichoals Kay waxa uu soo dhaweeyey Go’aanka Mideysn ee Dowladda Federalka iyo Maamul-gobaleedka K/Galbeed ku gaareen in la asaaso Guddiyo baaritaano ku sameeya dilkaasi.